News - Waa maxay kordhiye？
Waa maxay kordhiye？
Qalabka Karaoke marka lagu daro kuwa ku hadla, qalabka muusikada aad ayuu muhiim u yahay, tayada cod-weynaha laftiisa sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Shaqada KTV waa in lagu daraa cabirka qolkaaga iyo qalabka qurxinta. Qeybaha kala duwan ee qolalka waa inay isticmaalaan koronto-dhaliyeyaal kala duwan. Fiiro gaar ah u yeelo iswaafajinta awooda kororka iyo kuhadalka.
Awoodda kororka kororka kororka kororka kororka ee qaabeynta marxaladda hore guud ahaan waa yar tahay, dadka ku hadlaana waa kuwa ku hadla awoodda yar yar oo leh xasaasiyad sare. Dhibaatada ugu badan waa cawaaqib celinta. Sababta ayaa ah in keydka korontadu uusan ku filnayn marka muggu sarreeyo, taas oo keenta cillad daran oo dhanka signaalka ah. Intaas waxaa sii dheer, qalloocinta hadalka xasaasiga ah ee dareenka waa jawaab celin, qalloocana waxaa lagu weyneyaa si wareegsan, taasoo horseed u noqota jawaab celinta oohinta. Mabda 'ahaan, sababta ugu weyn ee jawaab celinta qeylintu waa dhalanrog. Yaraynta dhalanrog waxay yareyn kartaa suurtagalnimada oohinta jawaab celinta. Si kastaba ha noqotee, lama dhihi karo ma jiri doonto jawaab celin qaylo ah. Kaliya inta udhaxeysa faa'iidooyinka la heli karo, marka faa iidadu ay weynaato, waxay u horseedi doontaa jawaab celin baroor. Taasi waa in la yiraahdo, kordhiyaha awooda karaoke waa inuu doortaa awood sare sida ugu macquulsan. Si kastaba ha noqotee, awoodda sare ee kororka kororka kororka, ayaa sii xoogeysa dareenka codka. Iyada oo loo marayo khibrad wax ku ool ah, kanaal kasta oo u dhexeeya 8 Ω 450W waa la dooran karaa.
Qolka in ka yar 18 mitir laba jibbaaran asal ahaan waa si fiican loo qaabeeyey echo saameyn karaoke awood kordhiye. Si kastaba ha noqotee, dhawaaqa dhaqameedku wuxuu sababi doonaa hubin la'aanta saameynta codka, iyo shuruudaha ka saarista saameynta martida kasta ayaa ka dhigi kara maareeyaha inuusan waligiis awoodin inuu go'aamiyo saameynta meel mideysan, taas oo sidoo kale daalin doonta DJ. Sababta labaad ee loo adeegsado koronto-dhaliyaha koronto-dhaliye ee leh mashiinka 'DSP processor' ayaa ah in qalabka wax-soo-saarka echo-dhaqameedka dhaqameed uu leeyahay jawaab celin soo noqnoqota oo ciriiri ah (oo ka yar 8kHz) iyo soo noqnoqosho yar yar, taasoo ka dhigaysa faahfaahin la'aan deegaanka u baahan wax soo saar awood sare leh. Soo noqnoqodka muunad qaadista 'DSP' ee 48K iyo baaxadda baaxadda ballaadhan ee 20hz-23khz waxay keeneysaa tayada codka oo wanaagsan iyo firfircooni dhexdhexaad iyo mid hooseeya oo wanaagsan. Taasi waa sababta aynaan u heesan karin dadka, mar haddii la adeegsado qalabka wax lagu weyneeyo ee DSP, codkooda si lama filaan ah ayaa loo qurxiyaa, soo jiidashada magnetic-ka, soo jiidasho badan, dhawaq ka raaxo badan.
Sababta seddexaad ee loo adeegsado kordhiyaha korontada ee processor-ka DSP ayaa ah in processor-ka waxtarka leh ee DSP uu kaydin karo xog badan oo saameyn leh, sidoo kale wuxuu keeni karaa waxqabad dhab ah oo la isticmaali karo "reverb", macaamiisha wuxuu siinayaa khibrad badan oo k-khibrad ah, runtiina xaqiiqsada karaoke-iskaa wax u qabso macaamiisha, oo si weyn u yareeya baahida adeeg ee DJ. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo leh hawsha bilowga otomaatigga ah ee nidaamka VOD, saameynta dhawaaqa qolalka gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale gaari kara bilowga Isla heerkaas. Si caddaalad loo ahaado, qol gaar ah oo ka hooseeya 18 mitir laba jibbaaran, haddii aan qiimeyno oo keliya tayada codka, saameyn echo dhaqameed si fiican loo qaabeeyey ayaan ka liidan tan DSP, laakiin waxay u muuqataa mid qaro weyn oo jilicsan. DSP waxay leedahay xoogaa dhadhan dijitaal ah, oo aan jilicsaneyn. Haddii LPF of DSP lagu hagaajiyo 8kHz, isbarbardhiga labadooda ayaa aad u muuqda. Farqiga ugu weyni waa xoog-soo-noqnoqodka hooseeya, xamaasadda iyo dhumucda.
Xulashada koronto-dhaliye koronto-dhaliye isku dhafan iyo qaabeynta kala-soocidda hore iyo gadaal waxay inta badan kuxirantahay baahida dhabta ah ee qolka arjiga. Qolalka ku jira 18 mitir laba jibbaaran, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato DSP isku-darka kororka kororka karaoke ee qiyaastii 200W; qolalka leh bed ka badan 18 mitir laba jibbaar ilaa 25 mitir murabac ah, saddex kanaal 200 W DSP karaoke awood kordhiye ayaa la dooran karaa si loo kordhiyo af-hayeenka dhexe sida dheellitirka codka bass-ka ee bartamaha; qolka gaarka loo leeyahay oo ka badan 25 mitir laba jibbaaran waa in la tixgeliyaa Marka loo eego qaabka dhabta ah ee qolka, arrimaha sida heerka cadaadiska dhawaqa, isku ekaanshaha maqalka iyo aasaaska dib u soo celinta dhulka ayaa inta badan la tixgeliyaa. Awoodda ku habboon waxaa lagu doortaa iyadoo la isku darayo astaamaha afhayeenka iyo kororka koronto ee marxaladda dambe ee afhayeenka guud. Qeyb-ka-wadaha awoodda-yar ee kororka koronto-dhaliyaha ayaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo kharashka ku-simaha ku-hadalka awoodda yar.
Karaoke Microphone la qaadan karo, Muuqaalka Miracast, Microphone Karaoke Wireless ah, Hees Cajiib ah Karaoke Player,